नेपालगञ्जबाट ओलीको चुनौतीः भोट गन्दा थाहा पाउला, मधेसबाट को बढारिन्छ, हार्नलाग्दा भोट च्यात्न चाहिँ नखोज्नू! | NepalDainik
नेपालगञ्जबाट ओलीको चुनौतीः भोट गन्दा थाहा पाउला, मधेसबाट को बढारिन्छ, हार्नलाग्दा भोट च्यात्न चाहिँ नखोज्नू!
एमालेले जित्छ । अरुले एमाले विरुद्ध षडयन्त्र किन गर्छन् भने एमाले बलियो छ । यो नेपालगंजमा त चुनावमा मात्रै होइन समसुद्धिन सिद्धिकीसँग अखडामा लड्नु पर्यो भने पनि अरुले विचार गर्नु पर्छ । कसैले आँटै गर्दैन । किनभने बलियो छ ।
एमाले बलियो भएपछि अरुले लड्न विचार गर्नु पर्छ, योजना बनाउनु पर्छ अनि दलबल गर्नु पर्छ । अरु अरु त्यसरी दलबल गरेर आउन सक्छन् एमालेका विरुद्ध । साँठगाँठ गर्न सक्छन्, षडयन्त्र गर्न सक्छन्, अनेक प्रकारका योजना बनाउन सक्छन् । अरुले जतिसुकै साँठगाँठ गरे पनि एमाले पहिलो छ भन्ने कुरा अघिल्लो चरणको चुनावले देखाइसकेको छ । कतिपय ठाउँमा बुथकब्जा अनेक चिज भए । कतिसम्म भएको रहेछ भन्ने कुरा तपाईंहरुले भरतपुरमा देख्नु भो । भोट गनिसक्न लाग्दा ७८४ ले एमाले अगाडि लाग्दा दाुईचारवटा मत च्यातेर तमासा गरेका छन् । अहिले मतगणना रोकिएको रोकियै छ । चुनाव भएपछि मत गन्नु पर्दैन ? गनेर परिणाम घोषणा गर्नु पर्दैन ? हार्नेको प्रतिनिधिले च्यातेर जित्नेलाई जीतको घोषणा हुनबाट रोक्ने, फेरि चुनाव गर्ने भनेर अनेक तमासा भइरहेका छन् । मुद्दा अदालतमा छ हामी धेरै भन्न चाहंदैनौं । एमाले जित्नलाग्यो भनेपछि मत च्यातेर गलत मनसायले मत च्याते । जति कब्जा गरे पनि, जति मत च्याते पनि नेकपा एमालेले अत्यधिक ठाउँमा जितेको छ ।
Posted by Arjun Bhattarai at 6:29 PM
No Comment to " नेपालगञ्जबाट ओलीको चुनौतीः भोट गन्दा थाहा पाउला, मधेसबाट को बढारिन्छ, हार्नलाग्दा भोट च्यात्न चाहिँ नखोज्नू! "